Roman Polanski ayaa lagu eedeeyay kufsi: Jean Dujardin wuxuu beeray 20h ee TF1 - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Roman Polanski ayaa lagu eedeeyay kufsi: Jean Dujardin wuxuu ku dhacay 20h ee TF1
Roman Polanski ayaa lagu eedeeyay kufsi: Jean Dujardin wuxuu beeray 20h ee TF1
In tiirarka of PSG maalmo ka hor, sawir qaadaha Valentine Monnier ayaa yidhir ku xadgudbay Roman Polanski ee 1975, intii ay jirtay 18 sano. Markhaatigiisa waxaa xaqiijiyey dad badan, kuwaas oo sheegta inay goob joog ka ahaayeen ficilada filim sameeyaha oo hadda jira da '86 sano. Murankan cusub ayaa ka dhex qarxaya goorta filim sameeyaha uu soo xayeysiinayo filimkiisa cusub Jacqus, la keenay shaashadda Jean Dujardin, Louis Garrel iyo afadiisa Emmanuelle Seigner. sida laga soo xigtay Le Parisien, odaygii hore ee Alexandra Lamy baajiyay booqashadiisa 20h Anne-Claire Coudray, ayaa jadwalkaan dhigtay Sabtiga 9 Noofambar, sababtoo ah eedeymo la beegsaday filim sameeyaha.
Dhowr iyo toban sano, Roman Polanski waxaa lagu eedeeyay haween kala duwan oo ah kufsaday, kadeeday ama kufsaday. Marka loo eego Interpol inuu yahay baxsad, filim sameeyaha filimka 86 sano wuxuu ka cararay Mareykanka dhowr sano ka hor, ka dib markii uu xukumay xukun ugu horreeya. Isaga ilaa iyo mar kale waxaa lagu xukumay eedeymo la xiriira tacaddi galmeed afar haween ah oo da 'yarta ku jirtay xilligii dhacdooyinka lagu soo eedeeyay. Aktarka ayaa maanta loo oggol yahay inuu si xor ah u wareego saddex dal oo keliya : Faransiiska, Poland iyo Switzerland.
"Waxay ahayd mid rabshad badan"
Roman Polanski ayaa mar walba beeniyay eedeymaha loo haysto, wuuna isku hallayn karaa taageerada xaaskiisa Emmanuelle Seigner, kii uu guursaday tan iyo 1989. Laga soo bilaabo PSG maanta oo ah Sabtiga '9 november', Valentine Monnier, sawir qaade, ayaa ka marag kacay in sidoo kale uu kufsaday Roman Polanski 1975: Wax xiriir ah lama lihi isaga, shaqaale ama xirfadle midna si adag uma garaneyn isaga. Waxay ahayd mid aad u dagaal badan, ka dib safar baraf ah, oo uu ku qaatay rakhiiskiisa Gstaad (Switzerland). Wuu i garaacay, wuu i garaacay ilaa aan isa soo dhiibo ka dibna wuu i kufsaday aniga oo igu qasbaya dhammaan guulaha ". Waqtigaas, Roman Polanski wuxuu jiray 42 sano. Waxay ahayd uun mid weyn.
Adèle Haenel "wuxuu rumeysan yahay" Valentine Monnier
Iyadoo loo marayo garyaqaanadiisa, Roman Polanski "In si adag looga hortago dacwad kasta oo kufsi ah". Soo dejintaas cusub ayaa timid dhowr maalmood kadib markii kuwii uu waday Adèle Haenel, kaasoo ku eedeeyay agaasimuhu Christophe Ruggia "Dhaqanka galmada ee aan habooneyn ee u dhexeeya 2001 iyo 2004, intii ay ahayd 12 da 'da 15". Wareysi lala yeelanayo Mediapart, jilaa laba jilaa ah ayaa ku dhawaaqday inay tahay dhibbane "xajinta (...) ee kufsashada iyo kadeedis galmo " ka mid ah kii ku hagayay 2002 ee kuyaal jinniyada. Waxaa weydiiyay Le Parisien maanta oo Axad ah, ayay Adele Haenel tidhi "Rumaystay"Valentine Monnier.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/roman-polanski-accuse-de-viol-jean-dujardin-plante-le-20h-de-tf1-1047100
Asalka "Marlboro Man" wuxuu dhintay ka dib noloshiisa oo aan sigaar cabin - dadka
Royal snub: Muxuu Meghan Markle keligiis ugu ahaa Maalinta Xusuusta?